အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်း၏ဓလေ့ထုံးစံနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ (၁၉၉၀) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn On
Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု & နေရာ
လေ့နှင့်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Dishabituation (1990)
မှတ်ချက်များ - တူညီသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းတွင်အမျိုးသမီးများ၏လေ့ကျင့်ခန်း (dopamine တုန့်ပြန်မှုကျဆင်းခြင်း) နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု (dopamine တိုးလာခြင်း) ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားနှင့်ထိတွေ့သောအခါသရုပ်ပြခြင်း။ ဤသည်မှာအလုပ်၌ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် - လိင်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်တစ်ခုနှင့်တင်ပြသည့်အခါနောက်ထပ် dopamine ။
Res Ther ပြုမူနေ။ 1990;28(3):217-26.
Meuwissen ငါ, R ကိုကျော်.
စိတ်ပညာဌာန,, La Trobe University က, Bundoora, ဗစ်တိုးရီးယားသြစတြေးလျ။
အမြိုးသမီးမြားအမြားအပွားအခါသမယအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်းကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်ကျော်အတူတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အလုပ်တစ်ခုခုကိုစဉ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မလိင်စိတ်နိုးထ၏ဆောင်ရွက်ချက်များတစ် session တစ်ခုအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအထပ်ခါတလဲလဲခေါ်ဆောင်သွားဆွ၏သင်တန်းကာလအတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သွေးခုန်နှုန်းလွှဲခွင်ထဲမှာသိသိသာသာလျှော့ချရှိခဲ့သည်။ ဝတ္ထုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၏နောက်ဆက်တွဲတင်ဆက်မှုလိင်စိတ်နိုးထအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့နှင့် dishabituation များအတွက်အခြေစိုက်စခန်းများဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။